Hesekiel 7 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
7 Na Yehowa san ka kyerɛɛ me sɛ: 2 “Onipa ba, nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka akyerɛ Israel asase ni, ‘Awiei—asase no afanan nyinaa awiei adu.+ 3 Afei w’awiei adu,+ na mɛsoma m’abufuw aba wo so; mebu wo atɛn sɛnea w’akwan te+ na mama w’akyide nyinaa adan aba wo so. 4 Merenhu wo mmɔbɔ+ na me yam renhyehye me mma wo; mɛma w’akwan adan aba wo so, na mɛma woatwa w’ankasa akyide so aba,+ na mubehu sɛ mene Yehowa.’+ 5 “Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Hwɛ, mmusu, mmusu soronko bi reba.+ 6 Awiei bɛba.+ Awiei bɛsɔre abɛto wo; hwɛ, ɛreba.+ 7 Wo a wote asase no so, mmusu abotiri bɛba wo so; bere no bɛba, da no abɛn.+ Ɛbɛyɛ gyegyeegye, na ɛnyɛ mmepɔw so osebɔ. 8 “‘Afei ɛrenkyɛ na mahwie m’abufuw agu wo so,+ na mede m’anibere bewie wo so;+ mebu wo atɛn sɛnea w’akwan te+ na mama w’akyide nyinaa adan aba wo so. 9 Merenhu wo mmɔbɔ+ na me yam renhyehye me mma wo;+ mɛma w’akwan adan aba wo so na woatwa w’ankasa akyide so aba,+ na mubehu sɛ me Yehowa na merebobɔ mo.+ 10 “‘Hwɛ da no. Hwɛ, da no reba.+ Abotiri no nam kwan so.+ Abaa no afefɛw.+ Ahantan afifi.+ 11 Basabasayɛ asɔre agyina na adan amumɔyɛ abaa.+ Emfi wɔn, emfi wɔn ahode, emfi wɔn ankasa, na anuonyam biara nni wɔn mu. 12 Ɛbere no bɛba, da no bedu. Mma ɔdetɔfo nnni ahurusi+ na ɔdetɔnfo nso nnni awerɛhow, efisɛ abufuhyew aba dɔm no nyinaa so. 13 Sɛ ɔdetɔnfo no te ase mpo a, ɔrentumi nkɔ nea watɔn no ho bio, na anisoadehu no fa ne dɔm nyinaa ho. Obiara nni hɔ a ɔbɛsan n’akyi, na wɔn bɔne rentumi nnye wɔn nkwa. 14 “‘Wɔahyɛn torobɛnto+ na obiara asiesie ne ho, nanso obiara nni hɔ a ɔbɛkɔ akɔko, efisɛ m’abufuhyew aba ne dɔm nyinaa so.+ 15 Nkrante+ wɔ abɔnten so, na owuyare ne ɔkɔm wɔ fie.+ Nea ɔwɔ afuw mu no bɛtɔ nkrante ano, na nea ɔwɔ kurow mu no, ɔkɔm ne owuyare bɛmene no.+ 16 Na wɔn a wobenya wɔn ti adidi mu no beguan+ akɔ mmepɔw so, na wɔbɛyɛ sɛ abon mu mmorɔnoma a wɔresi apini,+ obiara bɔne nti. 17 Nsa nyinaa mu behodwow,+ na nkotodwe nyinaa bɛporow nsu.*+ 18 Wofurafura atweaatam+ na ahopopo dura wɔn ho,+ aniwu wɔ wɔn nyinaa anim+ na wɔn nyinaa ti so apa.+ 19 “‘Wɔbɛtow wɔn dwetɛ agu mmɔnten so, na wɔn sika kɔkɔɔ bɛdan atantanne. Wɔn dwetɛ anaa wɔn sika rentumi nnye wɔn Yehowa abufuw da no.+ Wɔrentumi mma wɔn kra mmee, na wɔrenhyɛ wɔn yafunu mã, efisɛ ɛyɛ hintidua a ɛma wɔyɛ bɔne.+ 20 Wɔn agude fɛfɛ no ama wɔayɛ ahantan, na wɔde ayɛ akyide ahoni,+ wɔn abofonode no.+ Enti mɛma adan atantanne ama wɔn.+ 21 Mede bɛhyɛ ahɔho nsa ma wɔafom na mede ama nnebɔneyɛfo ma wɔafa sɛ asade,+ na wobegu ho fĩ. 22 “‘Meyi m’ani afi wɔn so,+ na wobegu m’akorae ho fĩ, na akorɔmfo bɛba abegu ho fĩ.+ 23 “‘Yɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn no,+ efisɛ atemmu ho mogya ahyɛ asase no so mã,+ na basabasayɛ nso ayɛ kurow no mã.+ 24 Na mede aman no mu abɔnefo+ bɛba ma wɔabɛfa wɔn afie;+ mɛma ahoɔdenfo ahantan agyae+ na wɔn asɔredan ho agu fĩ.+ 25 Ahoyeraw bɛba, na wɔbɛhwehwɛ asomdwoe nanso wɔrennya bi.+ 26 Amanehunu bedi amanehunu akyi,+ amanneɛbɔ bedi amanneɛbɔ akyi, na nnipa bɛhwehwɛ anisoadehu afi adiyifo hɔ,+ na mmara bɛyera afi asɔfo anom na afotu ayera afi mpanyimfo tirim.+ 27 Ɔhene bedi awerɛhow;+ obirɛmpɔn befura ahoyeraw+ na asase no sofo nsam ahodwow. Me ne wɔn bedi sɛnea wɔn akwan te+ na wɔn atemmu na mede bebu wɔn atɛn,+ na wobehu sɛ mene Yehowa.’”+
^ Kyerɛ sɛ, ehu nti wɔdwensɔdwensɔ wɔn ho.